Dalxiiska Adduunku wuxuu u baahan yahay caawimaad, Sacuudi Carabiya ayaa ka jawaabeysa
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Safarka » Dalxiiska Adduunku wuxuu u baahan yahay caawimaad, Sacuudi Carabiya ayaa ka jawaabeysa
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • News • Dadka • Sacuudi Carabiya Warka • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Wasiirka Dalxiiska Sacuudiga wuxuu la kulmay wasiirka Jamaica - wayna baashaalayeen.
Dunida dalxiiska adduunka iyo madaxdeeda ayaa isbedelaya. Waddan kasta wuxuu u dagaallamayaa badbaadintiisa xilliyada aafada, halka Wasiirka Dalxiiska Sacuudiga Axmed Al-Khateeb, iyo wasiirka Jamaica ay u arkaan xal caalami ah inuu noqdo xoog caalami ah oo waxtar u leh warshadaha.
COVID-19 wuxuu ku dilay dalxiis meelo badan oo adduunka ah tan iyo bishii Maarso 2020. Warshadaha ayaa ku qeylinaya lacag, caawimaad iyo hoggaamin, iyo HE Axmed Al Khateeb Wasiirka Dalxiiska Sacuudi Carabiya ayaa si weyn ugaga jawaabey.
Dhaqan ahaan waxaa loo yaqaanaa 12 bilyan sanadkii warshadaha dalxiiska diinta, Sacuudi Carabiya waxay horumarisay Mashruuca Badda Cas waxayna ku bixisay balaayiin doolar horumarinta dalxiiska Boqortooyada, haddana waxaa sidoo kale loogu talagalay soo celinta dalxiiska caalamiga ah.
Maaddaama ay tahay dalxiis ku cusub dunida galbeedka, oo ay haysato lacagta lagu bixin karo, Sacuudi Carabiya waxay ku guuleysatay inay ka guurto cunugga cusub ee ku jira dhismaha una wareejiso xoogga hoggaanka dalxiiska adduunka ka hor inta uusan xitaa qofna ogaan. Adduunku wuxuu garaacayaa albaabka Sacuudi Carabiya, martida noocaas ahna waa loo ogolaadaa oo si wanaagsan ayaa loola dhaqmaa. Tani waa habka Carabta.
HE Axmed Al-Khateeb, Wasiirka dalxiiska boqortooyada Sacuudi Carabiya wuxuu qabtay jagada madaxweynaha Saudi Arabia Maamulka Madadaalada Guud intii u dhaxeysay May 2016 iyo June 2018. Kahor inta uusan noqon Wasiirka Caafimaadka. Waxa kale oo uu lataliye ahaan uga soo shaqeeyey Maxkamadda Boqortooyada Sucuudiga.
Waxay ku bilaabatay Mashruuca Badda Cas taas oo loo abuuray meel gaar ah, meel dalxiis oo raaxo leh oo soo jiidan doonta dabeecadda, dhaqanka, iyo tacaburka, dejinta heerar cusub oo horumar waara leh iyo ka-dhigista Saudi Arabia khariidadda dalxiiska adduunka. Sacuudi Carabiya waxay maalgashi xoog leh ku sameysaa kaabayaal dalxiis oo casri ah.
Kaliya bishii Sebtember 2019, Sacuudi Carabiya wuxuu bilaabay bixinta fiisooyinka dalxiis ee muwaadiniinta dalalka reer galbeedka. 10-ka maalmood ee ugu horeeya gudahood, Sacuudi Carabiya ayaa ku dhawaaqday in 24,000 oo soo booqdayaal ah ay yimaadeen Boqortooyada markii ugu horeysay.
Waxay ahayd markii ugu horreysay ee dalxiis dhaqameed uu dhab uga noqday dal adduunka ka xirmay, marka laga reebo dalxiis diimeed. Dakhliga dalxiiska diineed ee sanadka 2019 wuxuu ahaa $ 12 bilyan.
Sacuudi Carabiya kaliya maahan door muhiim ah gobolka, waxay door muhiim ah ka ciyaartaa xasilinta dhaqaalaha adduunka. Aragtida Boqortooyada ee 2030 waxay si dhow ula jaanqaadeysaa ujeedooyinka asaasiga ah ee G20 ee xasilloonida dhaqaalaha, horumarka waara, awood siinta haweenka, kor u qaadista raasumaalka aadanaha, iyo kor u kaca socodka ganacsiga iyo maalgashiga. oo ay ansixiyeen Golaha Wasiiradda ee Sacuudi Carabiya, waxay iskaashi la leeyihiin bangiyada gaarka loo leeyahay iyo bangiyada maalgashiga si ay u taageeraan horumarka qaybaha gaarka loo leeyahay iyo dhiirigelinta maalgashi dheeraad ah oo lagu sameeyo warshadaha.
Dunida inteeda badan waxay la daalaa dhaceysaa inay ku sii hayaan dalxiiska ganacsiga, halka Sacuudi Carabiya ay maalgelinayso balaayiin si ay Boqortooyada uga dhigto xarun caalami ah qaybtan. Shaqaalaynta haweeneyda ugu awooda badan dalxiiska, madaxa WTTC Gloria Guevara maadaama lataliyaha wasiirka uu muujinayo in dalku dhab yahay, ujeedooyinkuna ay cad yihiin.
Jamaica iyo Boqortooyada Sacuudi Carabiya waxay bilaabeen wada hadalo ujeedkoodu yahay fududeynta iskaashiga iyo maalgashiga dalxiiska iyo meelaha kale ee muhiimka ah, ka dib shirar isdaba joog ah oo dhexmaray Wasiirka Dalxiiska, Mudane. Edmund Bartlett.
Waxay u muuqataa markii loo yeerayo Sacuudi Carabiya, Boqortooyada waxay uga jawaabtaa saaxiibtinimo, lacag, iyo magacyo caalami ah oo diyaar u ah inay caawiyaan ama maskaxda ka shaqeeyaan.
Sacuudi Carabiya waxay noqotay cutubka labaad ee Shabakada Dalxiiska Adduunka, ururka ka dambeeya adduunka dib u dhiska.rajo wadahadal.
Dalxiiska iyo fursadaha waa weyn yihiin gudaha iyo Sacuudiga. Xubinta Gudiga WTN Raed Habbis oo ka socota Shirarka iyo Bandhigga Baseera ayaa soo bandhigtay guddi ka kooban hoggaamiyeyaal heer sare ah oo dalxiis oo ku sugan Sacuudi Carabiya, laakiin tan ugu wanaagsan weli ma imaan.
Baahida loo qabo dalxiiska boqortooyada ee dalxiisayaasha reer galbeedka ayaa jira. Soo-booqdayaashu waxay diyaar u yihiin inay baaraan taariikhda gobolka oo ay indhahooda ku soo arkeen martigelinta qurxoon iyo dhaqanka xiisaha leh ee Sacuudi Carabiya.
Dhageyso doodda laga bilaabo Diseembar 2029